I Njakatiana sy i Lôla: nisongadinan’ny traikefa ny « Vazo sy mozika » | NewsMada
I Njakatiana sy i Lôla: nisongadinan’ny traikefa ny « Vazo sy mozika »
Hira, tononkira, dihy… Tafaraka teny an-tsehatra indray i Njakatiana sy i Lôla. Fampisehoana nitondran’ireto andrarezin’ny zavakanto ireto ny maha izy azy tsirairay kanefa nahitana ihany koa ilay fahaiza-miaraka.
Tafaraka ny samy goavana! Nifandimby niakatra ny sehatra i Njakatiana sy i Lôla, omaly tetsy Antsahamanitra, nandritra ilay seho « Vazo sy mozika ». Samy naneho ireo hira nahafantarana azy sy nivimbina ny vazo vaovao. Teny antsefantsefany teny, nasehon’ireto mpanakanto ireto ny mpijery tonga maro teny an-toerana ihany koa fa afaka mampiara-peo tsara izy roa lahy. Ireo rehetra ireo, samy nanasongadina ny traikefa matanjaka ananan’ny tsirairay avokoa.
Anisan’ny nisarika sy nampifantoka ny mpijery tamin’ny tolotra teny an-tsehatra ny fandaharan-kira nataon’ny tarika roa tonta. Tsy nisy mihitsy ny fotoana banga. Na tsy nitovy aza ny gadona, toy ny nifampitohy ny ambaran’ny tononkiran’izy roa lahy. Raha hira nilamina ny an’i Njakatiana no nentiny naneho ny endriky ny fitiavana, nodimbiasan’i Lôla tamina batrelaka izany. Na ny nifamadika tamin’izay. Ankoatra ny hira, voaravaka dihy ny teny an-tsehatra.
Tamin’ny ankapobeny, nahazo fahafaham-po ireo mpijery « Vazo sy mozika » izay nahitana ny sokajin-taona rehetra.